Ụbọchị My Pet » Olee otú Iji Nwee Otu Ịtụnanya mbụ Ụbọchị
emelitere ikpeazụ: Oct. 14 2020 | 5 min agụ
A mbụ ụbọchị nwere ike ịbụ a-egosi oge maka abụọ ọzọ. Ma maara ihe na-atụ anya, ọbụna ma ọ bụrụ i kwuru na onye ahụ na online ma ọ bụ na ekwentị na ikekwe na-eche na ị maara ha nnọọ nke ọma, ọtụtụ ndị na-eche na ụjọ na-atụ tupu a mbụ ụbọchị. Ya mere ebe a bụ ụfọdụ Atụmatụ nwere oké mbụ ụbọchị.
Nọgidenụ na-akpa ụbọchị obere - N'ihi na nke mbụ ụbọchị nwere ike ịbụ a obere egosi na ọ bụ ezigbo-eme ka ọ mkpụmkpụ ma na-atọ ụtọ. Nke a ụzọ i nwere ike nwere oké oge ọnụ na rụchaa na a elu. N'agbanyeghị ókè ị pụrụ ejikọrọ mgbe ị na-akparị ụka online, ọ pụrụ ịbụ kpamkpam dị iche iche mgbe i na-ezute mmadụ, na ị na amaghị otú ị na-aga ga-esi na ruo mgbe ị na-ewepụta oge na ha na ndụ n'ezie. Ya mere ịgba nke a n'uche na-akpa ụbọchị mkpụmkpụ.
Site na-eme ya otú a ma ọ bụrụ na ị na-adịghị obi ha mgbe ị nwere ike ịhapụ n'oge. Otú ọ dị ma ọ bụrụ na ị na- IHE n'ezie na-amasị ha, ọ dịkwa mkpa na-ụbọchị mkpụmkpụ. A akamba ndudue ndị na-eme mgbe ha na-akpa bụ na-emefu oge dị ukwuu ọnụ kwa ngwa ngwa. Ọ bụ ezie na ọ bụ eke na-na-anọ ọnụ mgbe ị na-amasị ibe, ọ ga-ekwe ka njikọ ịzụlite ọzọ ndammana ma ọ bụrụ na ọ na-amalite ihe ji nwayọọ nwayọọ na oge na-aga. Nke a ụzọ i nwere ike ịmata ibe nwayọọ nwayọọ. Ọzọkwa, ị ga-akpọrọ onye ọ bụla ọzọ ma ọ bụrụ na ị na-adịghị kwa dị nri na mmalite. Mma ndị na-ha onwe ha iche iche ndụ nakwa dị ka iwepụta oge mkpakọrịta nwoke na nwaanyị.
Iburu nke a n'uche na-eme ka izere nri abalị abụọ maka a mbụ ụbọchị. Ọ bụrụ na ọ na-enyo na-jogburu onwe (na ọ nwere ike) ị ga-anọdụ ala site na ala otu awa, na-emekarị ogologo, na ha, ma ọ bụ na-na-akparịkarị ahapụ n'oge.
Na-eme ihe na aka na na fun - Ọ bụ ezie na a ọṅụṅụ na mmanya a bụ oke maka a mbụ ụbọchị ọ bụghị ihe niile na-echepụta. Ọzọkwa, ọ pụrụ ịbụ na obere ike agbaji ice mgbe ị na-anọdụ ala gafee si ibe a iwu ọnọdụ. N'otu aka ahụ grabbing a kọfị nwere ike ịbụ ezigbo oke maka a mbụ ụbọchị n'ihi na ọ bụ ngwa na mfe, Otú ọ dị ma ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie ka na-echiche mere adịghị aga ihe pụrụ iche na aka na kama. Họrọ ihe ebe ị na-eme ihe na-eme ọnụ, ihe aka na mma dị ka nke a nwere ike inyere agbaji ice. Ezi Ihe Nlereanya na-esi nri ọnụ, na-aga mkpagharị a mara mma ọnọdụ, ite ma ọ bụ ihe na ebe ị na-arụ ọrụ dị ka otu ìgwè. Nke a ga-nrụgide oyi nke abụọ nke gị dị ka ị ga-eme ihe ọnụ. Ọ na-ekwe gị mmadụ na-abịa site n'aka ihe ndammana, kama na ụbọchị mbịne n'ime 'na N'ajụjụ ọnụ' gafee table, nke nwere ike mgbe-eme mgbe i zutere na a mmanya.
-Mma - Nke a ga-abụ akụkụ nke a dater si mantra, karịsịa maka otu nwanyi. Ọ na-aga na-enweghị na-asị na ị na-aghaghị mgbe niile na-nchekwa na uche na ịpụ izute n'ebe ọha na nke mbụ na i zute onye. Ị na-ekweta ịga nri abalị na ụlọ ha. N'agbanyeghị otú ọma ị na-eche na ị maara onye si na-ekwu okwu online, ị nwere ike mgbe n'ezie ịgwa otú a pụrụ ịtụkwasị obi na onye na-ruo mgbe ị nọrọ oge na ha. Ọzọkwa, n'ezie akụ gị nsinammuo (ezi mmuo). Ọ bụ ebe ahụ iji chebe gị na-emekarị gị nsinammuo ga-agwa gị mgbe ihe ma ọ bụ onye na-adịghị nri. Na-ege ntị na ya ma na mgbe niile-etinye nchekwa mbụ.
Jide n'aka na ị na-nri etiti nke uche tupu ị na-aga na gị ụbọchị - ọtụtụ ndị dị nnọọ na-aga ha ụbọchị guzozie si arụ ọrụ, na mgbe e nwere ihe dị njọ na nke a, ọ dị mkpa iji jide n'aka na ị na-egosi na nri etiti nke uche gị na ụbọchị. Ọ bụrụ na gị isi bụ ka gị na 'ime' ndepụta na ị ga-adị ukwuu fun na ụbọchị! N'otu aka ahụ ma ọ bụrụ na ị na-atụgharị elu mesiri, obi ụtọ na ịkwa ákwá na ị ga-eme ka a ọma mbụ echiche. Were minit ole na ole iji zuru ike ma kwadebe onwe gị n'ihu gị isi oyi na gị ụbọchị. Were ụfọdụ miri na ekuru ikuku ma na-eme a ntụrụndụ mmega ma ọ bụrụ na. Kwadebe uche gị - iji anya nke uche otú ị ga-achọ ka ụbọchị na-aga. Ọ bụrụgodị na i na-aga ogologo site na ọrụ ị nwere ike ime nke a mgbe na ụgbọ ala.
Ụfọdụ ndị inyom na-eji awa na-njikere ahụ, ma adịghị anọ ọ bụla oge na-akwadebe uche. Ọ bụ ezie na mma iji jide n'aka na ị na-eche obi ike na ọdịdị gị, okodu awa na ya nwere ike n'ezie tinye mgbali. Kama iwepụta naanị ogologo iji mee ka onwe gị anya smart na-eche ihe ọma, mgbe ahụ na-emefu a nkeji ole na ole na-akwadebe gị n'uche. Kwesịrị ị ga-aga na gị ụbọchị mmetụta upbeat na dịtụ jụụ. Ọ nwere ike na-adị mma ka egwu ụfọdụ na-ewuli elu music mgbe ị na-na-njikere na ọbụna nwere na-agba egwú gburugburu ụlọ. N'ịbụ ndị sịrị ya adịghị ịkagbu ụbọchị ma ọ bụrụ na ị na-agaghị na okè nke uche ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị bụ ụjọ. Ọtụtụ mgbe, mgbe ị na-esi ahụ ụlọ ahụ ma na ụbọchị ị ga-zuru ike na nwere fun.
Bụrụ onwe gị - Mgbe ụfọdụ mgbe ndị mmadụ na-aga na mbụ ụbọchị ha na-adịghị na ha. Ha ịgbanwe àgwà ha na-agbalị ime onye nke ọzọ. Ikekwe ha akwara na-mma nke ha na ha na-eme omume oddly, agbalị siri oke ike, clamming elu ma ọ bụ ọbụna na-etinye on a n'ihu iji kpuchie akwara. Nke a bụ kpam kpam-enweghị isi na ike imerụ gị Ohere nke na-eke a njikọ na-ekpori ndụ gị na ụbọchị. Amaara m na ọ pụrụ ịbụ akwara wracking nzukọ onye maka oge mbụ mere, ka m kọọrọ gị a obere ihe nzuzo. MMADỤ nile na-ele ụjọ na mbụ ụbọchị! Ya mere, gị ụbọchị ga-abụ na a ga-enwe mmetụta dị nnọọ ka ụjọ dị ka ị na-. Ọ bụ eke ya mere, ka onwe gị nko. Kama ichegbu onwe anyị banyere gị iwe uche na-amụta ihe ọhụrụ banyere onye a n'ihu gị na-eche banyere-eme ka ha na-eche ala. Otú a ị ga-ahụ onwe gị atụrụ ndụ nnọọ ndammana. N'ezie ọ bụrụ na ị họọrọ ime a na aka na-arụ ọrụ dị ka e depụtara n'elu nke a pụkwara inyere gị aka iji zuru ike. Mgbe ị na-enwe mmetụta nọrọ jụụ gị ezi àgwà ga-enwu site. Dị nnọọ onwe gị. Ị bụ zuru okè kpọmkwem otú ị na-.
Nwee anụrị - Dị n'ebe ọdịda anyanwụ omenala anyị niile yiri ka were akpa kpọrọ ihe nke ukwuu. Echefu banyere achọpụtakwa ma onye a bụ onye kwesịrị ekwesị ndụ ibe a ogbo. A mbụ ụbọchị abụghị maka ịchọpụta ma na ha na-adabara enyi nwoke / enyi nwanyị IHE. Nke na-abịa mgbe e mesịrị. Ohere inweta bụ ha na-adịghị – kasị mbụ ụbọchị adịghị eduga mmekọrịta ma ọ bụrụ na unu maara nke a, ọ pụrụ inyere gị aka jikwaa gị na-atụ anya. Mbụ ụbọchị bụ nanị na ị si n'ebe nzute na inwe mmekọrịta na ọhụrụ ndị mmadụ, na ha bụ maka ụtọ onwe gị na-enwe fun. Site n'ụzọ 'na fun' na nke a apụtaghị na-n'ezie mmanya na-egbu ma ọ bụ na-enwe mmekọahụ, ma nke kwesịrị ẹse na mbụ ụbọchị (ma ọ bụrụ na ị chọrọ a abụọ ụbọchị ahụ bụ). N'ihi na otu ahịa m na-arụ ọrụ mgbe m nwere ike ikwu na-si n'ebe na-akpa ke ata ụwa. M ukwuu nwere ike ikwu na ị na-agụ m isiokwu na-akpa dị ka ọgwụ na-amụta ihe.
Nwere fun mkpakọrịta nwoke na nwaanyị!